एमालेसँग विरक्तिएका बामदेव : न उनलाई चासो छ, न अरूले खोजे « AayoMail
एमालेसँग विरक्तिएका बामदेव : न उनलाई चासो छ, न अरूले खोजे
2021,23 November, 6:14 pm
काठमाडौं – चितवनको पर्यटकीयस्थल सौराहा सजिँदैछ। पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न तीन दिनपछि सुरू हुन लागेको १० औं महाधिवेशनका लागि एमाले नेता कार्यकर्ताको नजर सौराहामा टिकेको छ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको महाधिवेशन हुने भएपछि चासो र चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविकै हो। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट हजारौंको संख्यामा प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, पर्यवेक्षक आउने निश्चित नै छ।
‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ मूल नाराका साथ एमाले १० औं महाधिवेशनको अन्तिम तयारीको घडीमा छ।
उद्घाटन सत्रलाई ‘हाइटेक’ बनाउने उद्घोष गरेको एमालेले झन्डै आधा करोड खर्चेर दुई तले मञ्च बनाइरहेको छ। सहभागीहरूका लागि खाना, खाजाको ‘मेनु’ तयार भइसकेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँगको संवादमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ८ करोड खर्चको अनुमान गरेको बताए। ‘महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ८ करोड खर्चको अनुमान गरेका छौं, यो धेरै होइन,’ ओलीले भने।
महाधिवेशनलाई सफल बनाउन एमालेका तल्लोदेखि उपल्लो तहका नेता कार्यकर्ता जुटेका छन्, सौराहा पुग्न निमन्त्रणा बाँडिरहेका छन्। नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बाहेक सबै राजनीतिक दललाई उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन एमालेले निमन्त्रणा पठाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा विदेशी पाहुनालाई पनि बोलाइएको छ।
तामझामका साथ चितवनमा हुनलागेको एमालेको १० औं महाधिवेशनमा एमाले बनाउने र लामो समय एमालेको नेतृत्व गरेका नेताहरू नै उपस्थित हुने छैनन्।
एमाले बनाएर लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूविनै १० औं अधिवेशन हुँदैछ।
नेकपा विवाद र त्यसपछि एमाले ‘कलह’ का कारण नेपाल, खनाल र गौतमहरू अहिले त्यहाँबाट बाहिरिइसकेका छन्। एमालेबाट अलग भएर नेपाल नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष बनेर पार्टी हाँकिरहेका छन् भने खनाल वरिष्ठ नेता छन्।
एमालेको सबै जिम्मेवारी त्याग गरेर राजीनामा दिइसकेका गौतम भने अहिलेसम्म कुनै पार्टी रोजेका छैनन्।
१० औं महाधिवेशन भइरहँदा एमालेभित्र वर्षौंदेखि पकड जमाएका गौतम ‘गुमनामपात्र’ बनिसकेका छन्, अहिले। उनलाई न एमालेले खोजेको छ, न त उनी आफैंले महाधिवेशनका लागि चासो दिएका छन्।
एमालेमा छँदा गौतमको पक्षमा १६ केन्द्रीय सदस्य र ८ भन्दा संघीय सांसद थिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उनको राम्रै पकड थियो। गौतमको एमालेभित्र आफ्नो छुट्टै ‘लिगेसी’ थियो।
तर, नेकपादेखि एमाले विभाजनसम्म उनमा देखिएको अलमलका कारण धेरैले साथ छोडे। उनीनिकट कतिपय केपी शर्मा ओली र कतिपय माधवकुमार नेपालतिर लागे।
एमालेमा हक्की र निडर स्वभावको छवि बनाएका गौतम अडानमा कायम रहन नसक्दा निष्प्रभावी हुँदै गएका छन्।
भदौ १८ गते पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर एमालेबाट राजीनामा दिँदै गर्दा उनी एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्ने एकखाले आकलन थियो। तर, त्यो आकलनलाई गलत सावित गरिदिए। कुनै पार्टीमा गएनन्। बरू दलविहीन भएर बसिरहे। अहिले पनि गौतम त्यही ‘पोजिसन’ मा छन्।
वामदेव! गुल्टिँदै गुल्टिँदै राष्ट्रियसभासम्म
गौतमले एमालेसँग ‘मोह’ भङ्ग गरेको यो पहिलोपटक होइन। २४ वर्षअघि उनकै नेतृत्वमा एमाले विभाजन भएर नेकपा माले गठन भएको थियो।
त्यतिबेला एमाले छोड्ने क्रममा उनले पार्टी नेतृत्वमाथि महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात आरोप लगाएको थिए। सन्धि अनुमोदनका क्रममा सुरू भएको विवाद २०५४ सालमा अन्ततः नेपालगञ्ज (छैठौं) महाधिवेशनमा पुगेर विभाजनमा टुंगिएको थियो।
२०५४ सालमा एमाले छोडेर माले गठन गर्दा गौतमले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीलगायतका प्रमुख नेताहरूसँग सम्बन्ध तोडेका थिए।
त्यतिबेला उनलाई सिपी मैनाली, सहाना प्रधानलगायतका नेताहरूको साथ थियो। त्यसको तीन वर्षपछि गौतम पुनः एमालेमै फर्र्र्किएका थिए।
के गरिरहेका छन् वामदेव?
एमाले विभाजन हुँदा गौतमले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने संकेत गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइरहेको दिन उनले एमालेबाट राजीनामा गरेर एकीकृत समाजवादीमा आउने सन्देश पठाएका थिए। त्यहीअनुसार उनको राजीनामा पनि आयो। तर, उनी एकीकृत समाजवादीमा गएनन्।
पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे पनि एमालेले उनलाई उपाध्यक्षकै रूपमा राखेको छ। निष्क्रियप्रायः भइसकेका गौतम १० औं महाधिवेशनपछि कुनै पदमा रहने छैनन्।
एमालेको १० औँ महाधिवेशनबारे गौतमले कुनै चासो नराखेको उनीनिकट एक नेताले बताए।
‘पार्टीबाट चार महिनाअघि राजीनामा गरिसक्नुभएको छ, उहाँ कुनै जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्न,’ गौतमनिकट ती नेताले भने,‘एमालेको महाधिवेशनसम्बन्धमा उहाँको खासै चासो देखेको छैन।’
एमालेका सम्पूर्ण पंक्ति महाधिवेशन सम्पन्न गर्न जोडतोडले लागिरहेको बेला गौतम भने छोरीको विहेको तयारीमा व्यस्त छन्। ‘केही दिनपछि उहाँको छोरीको विहे हुँदैछ, उहाँ त्यसकै तयारीमा लागिरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने।
एमालेको महाधिवेशनप्रति चासो नदेखाए पनि गौतम भने चुप छैनन्। कम्युनिस्ट एकताका लागि उनको प्रयास अझै जारी छ। नेकपा र एमाले विभाजन भइरहँदा उनले एकता अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए। आफ्नो त्यो अभियानलाई सार्थकता दिने प्रयासलाई गौतमले अझै विराम दिएका छैनन्।
गौतम रणनीतिक तरिकाले कम्युनिस्ट एकता बनाउने अभियानमा रहेको ती नेताको भनाइ छ। कम्तिमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका कम्युनिस्ट घटकहरूसँग एकता गर्ने अभियानमा उनी जुटेका छन्।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन वा एकताबाट बनेको शक्तिमा प्रवेश गर्ने सम्भवाना बलियो छ। तर, ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा फर्कने सम्भवना लगभग सकिएको छ।
ओलीले बनाएका थिए उपाध्यक्ष
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपश्चात बनेको नेकपामा गौतम उपाध्यक्ष बनेका थिए। पार्टीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था नरहे पनि गौतमकै लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रस्तावमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको थियो।
पछि नेकपा विभाजन भएर एमाले पुनःअस्तित्वमा फर्किएपछि पनि गौतम पार्टी उपाध्यक्ष ररिरहे।